Isanda kuHlaziywa iApartment eBasement eBasement epheleleyo eyi-2 - I-Airbnb
Isanda kuHlaziywa iApartment eBasement eBasement epheleleyo eyi-2
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguAndrew
Gxila elangeni kwaye uphumle apha eSarnia kwaye wonwabele konke esinako ukunika isixeko sethu. Sisondele kwiilwandle ezininzi zaseSarnia, edolophini (uhambo oluhle), umzila we-waterfront kunye nesikhululo sikaloliwe. Ikhaya lethu libekwe phakathi kwamakhaya amaninzi anqabileyo kunye nendawo entle yokuhambahamba.
Ukuba uhambo lwakho oluya eSarnia lukuzisela apha kwishishini simiselwe inkonzo ebalaseleyo ye-wifi kunye nesithuba esihle sokusebenza kwilaptop yakho kwindawo ezolileyo yendlu yakho. Ilayisensi # STA-011
Eli ligumbi elitsha lalungiswa, igumbi lokulala eli-2, ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo kunye nendawo yokuhlala enezindlu zokuhlambela ezi-3. Okufuneka uze nazo zizinto zakho zobuqu kwaye uya kuziva usekhaya.
Indawo yakho yeyakho! Ndiyazihlonipha iimfihlo zeendwendwe zam kodwa ukuba ufuna ukundifumana ngaso nasiphi na isizathu ungafikelela kum ngesms, ngomnxeba okanye ngemiyalezo yakwa-Airbnb. Ndilapha ukuze ndikuncede ukuba uyandidinga vele ufikelele.
Indawo yakho yeyakho! Ndiyazihlonipha iimfihlo zeendwendwe zam kodwa ukuba ufuna ukundifumana ngaso nasiphi na isizathu ungafikelela kum ngesms, ngomnxeba okanye ngemiyalezo yakwa-…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sarnia